पादरीको यौन अत्याचार सार्वजनिक गर्न खोज्दा पत्रकारहरुको जागिर चट | Kendrabindu Nepal Online News
पादरीको यौन अत्याचार सार्वजनिक गर्न खोज्दा पत्रकारहरुको जागिर चट
१४ चैत्र २०७५, बिहीबार १५:१३
भ्याटिकन सिटी । पादरीको यौन अत्याचार सार्वजनिक गर्न खोज्दा महिला सम्पादकहरुको जागीर नै गुमेको छ । भ्याटिकनसिटीबाट दैनिक रुपमा प्रकाशित हुने ‘लाओसरवतोर रोमानो’ पत्रिकाका महिला सम्पादक मण्डलले राजीनामा दिएका हुन् ।
आफ्ना समाचार दबाएको र समर्थक पत्रकार नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरूले आफ्ना खोजी समाचारमा रोक लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पत्रिकाकी संस्थापकले मंगलवार उक्त जानकारी दिएकी हुन्।
उक्त सम्पादकीय मण्डलमा सबै महिला छन्। इटालीको धार्मिक समाचार ब्लग ‘इल सिस्मोग्राफो’ का तर्फबाट प्रकाशित सम्पादकीयमा ‘वुमिन चर्च वर्ल्ड’ की संस्थापक लुसेता स्काराफियाले आफुहरुले हार खाएको बताएकी छन् ।
अविश्वास गर्ने र क्रमशः अवैध ठहर्याउने वातावरण तयार भईरहेको भन्दै राजीनामा दिएकी बताईन् । पादरीहरूले नन (क्रिश्चियन भिक्षुणी) माथि गरेका यौन उत्पीडनका मुद्दा उठाउन थालेका थिए। ननहरूमाथि यौन अत्याचारका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि पादरीहरू भयभीत भएका थिए।
उक्त पत्रिका सात वर्षदेखि प्रकाशन हुन थालेको थियो। उक्त पत्रिका भ्याटिकनको पत्रिकाका साथ मासिक रूपमा प्रकाशित हुने गर्छ। स्काराफियाले भनिन्, ‘उनीहरूका अपराध सार्वजनिक हुन थालेपछि लाओसरवतोरकी नयाँ सम्पादक आन्द्रिया मोन्दाले नियन्त्रण गर्न बाहिरी साझेदारलाई ल्याएर पत्रिकालाई कमजोर पार्न थालिन्।’
अत्याचारका समाचार लेख्नेभन्दा आज्ञाकारी व्यक्ति जम्मा गर्न थालेको उनले बताइन्। पोप फ्रान्सिसले चाहेबमोजिमका समाचार मात्र प्रकाशित गर्न प्रतिबद्ध पत्रकार ल्याएर अप्ठेरो पारेको उनको भनाइ छ। उक्त पत्रिकामा विशेषगरी चर्च र पादरीहरुको समाचार प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
pop, चर्च, पादरी, यौन अत्याचार
Prevविचरा कांग्रेस ! सर्पको खेल जस्तो ९९ मा पुगेर स्वाट्टै २ मा झर्‍योः प्रधानमन्त्री
एसईईमा विज्ञानको परिक्षा दिएपछि के भनिन् करिष्माले ? (भिडियोमा)Next
पशुपतिनाथको जमिनमा चर्च सञ्चालन, बार्षिक १ हजार ७ सय रुपैयाँ भाडा
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले गरे चर्चको उद्घाटन
चर्चको ज्यादतीः जबर्जस्ती गर्भपतन र परिवार नियोजन !